Momba ny Dubai, Emirà Arabo Mitambatra - Dubai Real Estate an'ny Provident
About Dubai Real Estate Provident
Ny tantaram-pahombiazan'i Dubai amin'ny maha-mpitarika an'izao tontolo izao ao amin'ny orinasa sy ny famolavolana dia nahazoana ny fanavahana iraisam-pirenena lehibe iraisam-pirenena ary nahatonga an'i Dubai ho toeram-pandraharahana, varotra ary toeram-pivarotana fizahan-tany. Dubai dia tanàn-dehibe manerantany, mpandraharaha ara-barotra miaraka amina rakitra goavana amin'ny fanatanterahana tetikasa lehibe - About Dubai Real Estate Provident.
Ny Governemanta dia natokana ho fialam-boly manao Dubai sy ny fialam-boly renivohitry ny izao tontolo izao mikendry ny hampiditra 15 tapitrisa isan-taona mpizaha tany 2010.Dubai dia maoderina cosmopolitan tanàna sy ny an-trano ho any ny fifangaroan'ny foko mihoatra noho 185 izay miaina ao mavitrika, tontolo iainana iraisam-pirenena ary nanjary lozisialy ho an'ny taonjato 21. Manana tetik'asa vaovao i Dubai.
Ny fitomboan'ny USD 15 arivo tapitrisa ny fiaramanidina Emirates Airlines ary ny fiparitahan'ny Dollar 4 arivo lavitrisa ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Dubai dia testamenta amin'ity fanoloran-tena ity mba hahatratrarana tanjona toy izany.
Ny fijerena ny tantaran'i Dubai, ny tanjony ara-jeografika mankany India dia nanao azy ho seranana manan-danja ho an'ny mpivarotra maro. Dubai dia fantatra tamin'ny fanondranana perla mandrapahatongan'ny 1930, fa noho ny ady lehibe roa sy ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana dia niparitaka io indostria io. Nisy ny sisintany sasany niady hevitra tamin'ireo emirate isan-karazany, na dia taorian'ny fananganana ny Emirà Arabo Mitambatra aza. Ny herinaratra, ny serivisy, ary ny seranam-piaramanidina dia niorina tao Dubai tao amin'ny 1950s, raha nanetsika ny biraom-panjakana avy ao Sharjah ho any Dubai ny British. Ny tanàna dia nanatevin-daharana ny firenena tsy miankina an'i Qatar hanangana vondrona vaovao, Qatar / Dubai Riyal, taorian'ny fialan'ny Gulf Rupee. Nahitana solika tao Dubai tamin'io taona io ihany koa, taorian'izay dia nanome alalana ny orinasan-tsolika iraisam-pirenena ny tanàna. Ny fitrandrahana solika dia nitarika ho amin'ny fidiram-bolan'ny vahiny, indrisy indrindra indianina sy Pakistaney, tao an-tanàna. Vokatr'izany, ny mponina tao 1968 hatramin'ny 1975 dia nihoatra ny 300%, araka ny vinavina sasany.
Tamin'ny Desambra 2nd 1971 Dubai, niaraka tamin'i Abu Dhabi, ary dimy hafa Mitambatra, namorona ny Emirà Arabo Mitambatra, rehefa niala teo aloha Grande-Bretagne mpiaro ny Hoala Persika in 1971. Tao amin'ny 1973, Dubai dia nanatevin-daharana ny emirate hafa hanangana volavolan-dalàna tokana: ny UAE dirham. Tao amin'ny 1970s, dia nitombo ny fitomboan'i Dubai avy amin'ny vola azo avy amin'ny solika sy ny varotra, toy ny fahitana ny habetsaky ny mpifindra monina Libane nandositra ny ady an-trano tany Libanona. Ny Jebel Ali Free Zone, ahitana ny Jebel Ali seranan-tsambo (hono, izao tontolo izao lehibe indrindra olona anankiray nanao seranan-tsambo) dia naorina teo an 1979, izay nanome orinasa vahiny tsy voafetra tena lanjan'ny asa sy ny fanondranana renivohitra.
Dubai dia heverina ho toerana azo tsinontsinoavina manerantany. Dubai no tanàna mihamitombo manerana izao tontolo izao. Dubai dia nomena toerana azo antoka honenana. Dubai dia tena miorina tsara ary tsy lavitra an'i Eoropa, Azia na Afrika. Dubai dia mahazo ny lohateny ho tanàna mpizahantany eran'izao tontolo izao. Miharihary izany amin'ny isa nomeny. Ny isan'ny mpitsidika any Dubai dia nitombo hatramin'ny 1.8 tapitrisa ka hatramin'ny 5.4 tapitrisa tao anatin'ny folo taona lasa.
Dubai dia toerana iray misy ny Tandrefana mihaona miankandrefana. Dubai dia mikolokolo ny fanambadiana tonga lafatra amin'ny fomba nentim-paharazana nentim-paharazana amin'ny tombotsoan'ny kapitalista tandrefana ka mahatonga an'i Dubai ho hery ara-toekarena goavana.
Dubai dia trano tena tsara ho an'ny voalohany
Manana ny iray amin'ireo seranam-piaramanidina lehibe indrindra eran-tany izy io
Ny seranan-tsambo lehibe indrindra manamboatra an'izao tontolo izao dia ao Dubai
Ny tranombarotra lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao dia eto
Ny hany hotely kintana 7 eto amin'izao tontolo izao dia ao Dubai
Ny valan-javaboary lehibe indrindra eto amin'izao tontolo izao ary dia heverina ho lehibe kokoa noho ny Disney parks any Florida.
Ny lavaka lehibe indrindra eran-tany
Palm Jumeirah, lehilahy voalohany nanao ny nosy palm-nify
Dubai dia haba malalaka. Ny andrana izay tonga eto amin'ny asa dia nahita fa misy zavatra ho an'ny olona rehetra eto amin'ity tanàna mahafinaritra ity. Ny tanàna maro samihafa nanompo toerana fisakafoana cuisinés, trano fisotroana kafe, teatra, multiplexes, Pubs, langilangy, Malls sns koa dia misy safidy marobe ny fialam-boly azo isafidianana.
Ny rafi-panabeazana dia tsara sy mandamina. Mihamitombo hatrany ny asa sy ny fahafahan'ireo orinasa any Dubai. Ny sehatry ny fananan-tany dia mihamitombo koa. Ny lehibe Dubai tantara fahombiazana lehibe izao tontolo izao amin'ny maha-mpitarika ao amin'ny orinasa sy ny toetr'andro no nahazo ny tanàna sehatra iraisam-pirenena sy ny famerenana fiderana faran'izay tsara izany dia nametraka Dubai ho toy ny mpitarika ara-barotra, ny varotra, ny trano fonenana sy ny mpizaha tany 'Hub. Dubai dia tanàna iray miavaka sy mandroso amin'ny fandraisana andraikitra miavaka izay miharihary amin'ny tetikasa samihafa. Ary ny zava-drehetra dia noho ny mpitarika lehibe ny fahitana.